Shabaab oo si rasmi ah u xaqiijiyay geeridii Cali Maxamed Xuseen – Bulshoweyn Media Network
Shabaab oo si rasmi ah u xaqiijiyay geeridii Cali Maxamed Xuseen
Ururka Al Shabaab, ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay geerida Cali Maxamed Xuseen (Cali Jabal), oo 30-kii bishii July lagu dilay weerar dhinaca cirka oo ka dhacay Gobolka Shabellaha Hoose.
Masuuliyadda weerarkan, ayaa waxaa sheegtay Militariga Mareykanka. Dowladda Somaliya, ayaa iyaduna sheegtay in hawlgalkaasi ay iska kaashadeen Ciidamada Danab oo taageero ka helaya Mareykanka.
Ururka Al Shabaab, ayaa bayaan uu soo saaray ku xaqiijiyay geerida Cali Jabal, Bayaankan waxaa ciwaan looga dhigay “Tahniyad iyo tacsi ku socota Umadda Islaamka oo ku aadan Istish-haadka Sheekh Cali Maxamed Xuseen.”
Cali Jabal oo Shabaabka ugu magacownaa Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, ayaa waxaa bayaanka lagu sheegay in Shabaabku u tacsiyadeynayan geesi weyn oo ka baxay ururka.
“Waxaan maanta halkaan uga tacsiyeyneynaa Istish-haadka geesi ka mid ah halyeeyada Islaamka ee baalka dahabiga ah ka galay sooyaalka taariikheed dhulka Soomaaliyeed, kana tagay taariikh weyn oo magaciisa wax badan ka xambaarsan.” Ayaa lagu yiri bayaanka.
Bayaanka oo looga waramay shakhsinimadii Cali Jabal, ayaa lagu sheegay ”Maanta waxaanu qireynaa marqaati kac ay taariikhdu keydin doonto oo uu leeyahay nin ku soo barbaaray tarbiyada Islaamka, ayna ka muuqatay calaamadaha daacadnimada iyo kartida, xifdisan Kitaabka Allaah, aqoon durugsan u leh culuumta luuqadda carabiga iyo usuusha Fiqhiga.”
“Garraadkiisa sareeya, Ra’yigiisa toosan iyo himmadiisa fog ayuu ku kasbaday kalsoonida hogaankiisa, Waxaana uu ahaa waaligii ugu horeeyey ee loo dhiibo xilka Wilaayaatka Islaamiga, Waxaana uu mas’uul ka noqday Wilaayada ugu muhiimsan, uguna culeyska badan Wilaayaatka dalka, Waa Wilaayada Banaadir ama Muqdisho, Waxa uu hoggaanka u qabtay xilli ay xaaladu aad u adag tahay, qalalaasa fara badana uu jiray, Wuxuuna ahaa mid gutay waajibkiisa oo wanaajiyey wilaayada, baacsadayna dambiilayaasha illaa uu amnigii dib u soo hagaagay.”
“Waxa uu heshiisyo dhexdhigay qabaa’illada illaa ay meesha ka baxday xiqdigii, ayna badashay walaaltinimo iyo kalgaceyl. Waxa uu hammigiisa ugu weyn ka dhigay in uu dhidibada u aaso Amniga iyo Ammaanka, Al-baabada Fasaadkana uu xiro. Tani waxaa aad looga dheehan karay sida adag ee uu ula mucaamilay ganacsatada dhiig miiratada ah iyo hay’adaha shisheeye ee u bareeray in ay raashiin iyo daawooyin dhacay ku soo daabulaan suuqyada caasimadda kuwaas oo uu ka soo xiray dhamaan wadooyinka, mana aanu jirin Bakhaar ama keydka bad-baaday baaritaanada adag si ay dadka Muslimiinta ugu nabadgalaan waxa ay iibsanayaan.”
“Sheekh Cali Maxamed Xuseen waxa uu ahaa mid heybad ku dhexleh bulshada dhexdeeda, taas oo keentay in dadka laga awoodda badan yahay ee ku dhaqan magaalada iyo hareeraheeda ay isaga soo miciin bidaan, una qeyla-dhaansadaan, isagoo xaqooda u soo celiyey, cadaaladna dhexdhigay, isagoo aanan kala sooceynin mid faqiir ah iyo mid taajir ah, Rag iyo dumar, mid yar iyo mid weyn, sidaas ayeyna xaaladu sii ahayd xitaa markii laga soo insixaabay magaalada Muqdisho xilligaas oo uu sheekhu saldhig ka dhigtay magaalada duleedkeeda si uu howsha halkaa kaga sii wado, halkaas oo ay uga daba yimaadeen dadweyne aad u fara badan oo ka soo baxay Muqdisho iyagoo raadinaya gurmadkiisa iyo xukunkiisa cadaaladda ku dhisan, ka dib markii uu kaalin udub dhexaad ah ka qaatay dardar gelinta garsoorka caasimadda, dadaal dheeri ahna ku bixiyey in dadka dulman hantidooda loo celiyo.”